Khabiir Kala Duwan: Fudud oo Fiirfiirinaya Qalabka Hackers
Marka kaysar-yaqaanku barto qaab si aad u-dirto urur, waxay u adeegsan doonaan inay sawiraankhibrad iyo guulihii hore. Sidaa daraadeed, isku day inaad si macquul ah u jebiso xogta jariidadu waxay cadeyn kartaa qiimaha muhiimka ah sida midka maskaxda galaee weerarka oo tixgeli siyaabaha ay u isticmaali karaan inay waxyeelo u geystaan.
Frank Abagnale, Maamulaha Guusha Macaamiisha ee Sare Adeegyada Digital, waxay soo bandhigaan noocyada ugu caansan ee weerarrada sida badan loo isticmaalo qawaaniinta:
Xakameyntu waxay loola jeedaa noocyo kala duwan oo ah barnaamijyo waxyeello leh sida fayrasyada iyo ransomwarekuwaas oo siinaya kuwa weerarka saaran. Marka ay kumbuyuutar soo galaan, waxay ka hortagaysaa sharafta kombiyuutarka iyo qaadashadamashiinka isticmaalka. Waxa kale oo ay la socotaa dhammaan macluumaadka soo socda ee gudaha iyo dibedda, iyo sidoo kale ficillada ku saabsan feejignaanta - business it support services. Inta badanXaaladaha, waxay u baahan tahay khaniisiinta in ay isticmaalaan siyaabo ay ku heli karaan qalabka looxiray sida rakibada, iyo email aan raad lahaynlifaaqyada.
Phishing ayaa sida caadiga ah loo adeegsadaa marka qofka weerarka geysta uu isku dhejiyo qof ama qofururka ay ku kalsoon yihiin inay sameeyaan wax aysan doonaynin. Waxay u muuqdaan inay isticmaalaan deg dega emailka, sida waxqabadka khayaanada, iyo emaillifaaq. Marka lagu soo lifaaqo lifaaqa, waxaa lagu rakibaa qalabka software-yada ah, kaas oo casriyeynaya isticmaalaha shabakada internetka, kaas oo sii wadayasi aad u weydiiso macluumaadka shakhsiyeed ee user.
3. Weerarka Xakameynta ee Seddex
Luqadda Lagu Dhameeyay Luqad-dejin waa luqad barnaamijka, kaas oo ka caawiya isgaarsiintaiyada oo la isticmaalayo macluumaadka. Qeybaha badankood waxay ku kaydiyaan macluumaadka gaarka ah ee macluumaadka ay ku qoran yihiin. Haddii ay jiraan wax khilaaf ah oo ku jira xeerka sirta ah, hacker ayaa laga yaabaa inuu isku durooo ka mid ah macaamiishooda, kuwaas oo u oggolaanaya albaab dambe oo ay ku weydiin karaan aqoonsi ka yimid isticmaalayaasha bogga. Arrintani waxay noqotaa dhibaato badanhaddii goobta ay ku kaydiso macluumaad muhiim ah oo ku saabsan isticmaalkooda sida xogta amaahda ee xogta..
4. Qorista Qeybinta (XSS)
Waxay u shaqeysaa si isku mid ah sida cirbadaha SQL, maadaama ay ku dhejinayso koodhka xun ee abogga. Marka martida ay galaan gelitaanka goobta, code wuxuu isku-dhejiyaa on browser-ka user, sidaas oo ay saameyneyso martida si toos ah.Qalabka Hackers wuxuu si toos ah u ordi doonaa faallooyin ama qoraallo ku yaal goobta si loo isticmaalo XSS. Isticmaale maahan in xitaa la ogaado in hackers ay afduubeenmacluumaadka illaa ay ka soo daahdo.
5. Diidmada Adeega (DoS)
Weerarka DoS wuxuu ka kooban yahay websaydhka xad-dhaafka ah ee taraafiga ilaa dhibicdhaafsiisan serverka oo aan awoodin in ay u adeegaan nuxurka dadka ay isku dayayaan in ay galaan. Nooca baabuurta ee loo isticmaalo qawaaniinta xaasidnimada ahwaxaa loola jeedaa in ay websaydhaan websaydhka si ay u xiraan dadka isticmaala Xaalad ay ka mid yihiin kombiyuutarro dhowr ah oo loo isticmaalo in lagu tiriyo, waxay noqonaysaa Diidi Baqshi ahWeerarka Adeegga (DDoS), oo siinaya qofka weerarka ka dambeeyay cinwaanka IP-yada kala duwan si uu u shaqeeyo isla mar ahaantiis, iyo in la adkeeyo raadinta iyaga.
6. Afduubka Kulanka iyo Weerarrada Dadka Dhexdhexaadinta ah
Dhexdhexaadinta iyo dibedda u dhexeeya kombiyuutarka iyo shabakadda shabakada foghaysta aqoonsi oo u gaar ah. Marka hacker uu helo haynta Aqoonsiga Kulanka, waxay sameyn karaan codsiyo muujinaya kombuyuutarka. Waxay u oggolaaneysaa inay helaansi sharci darro ah loo geliyo si aan loo ilaalin karin macluumaadkooda. Qaar ka mid ah siyaabaha loo isticmaalo in lagu afduubo aqoonsiyada kulanku waa iyada oo la marayoQoraallada iskudhafka ah.
7. Dib-u-hubin Aqoonsi
Sababtoo ah tirada korodhka bogagga u baahan lambarka sirta ah, ayaa isticmaalayaasha laga yaabaa inay doortaan inay dib u isticmaalaansirta loogu talagalay goobaha la siiyo. Khabiirada amniga waxay dadka ku taliyaan in ay isticmaalaan sirta khaaska ah. Khasaaradu waxay heli karaan isticmaale-yaqaanka iyo sirtaoo isticmaal weerarrada xooggan ee xooggan si ay u helaan. Waxaa jira maamulayaal sir ah oo la heli karo si looga caawiyo aqoonsiga kala duwan ee loo isticmaalo bogagga internetka.
Kuwani waa uun laakiin dhowr ka mid ah farsamooyinka ay isticmaalaan kuwa weerarka gardarada ah. Waxay si joogto ah u yihiinhorumarinta hababka cusub iyo kuwa cusub. Si kastaba ha noqotee, in la ogaado waa hal hab oo lagu yareeyo khatarta weerarrada iyo hagaajinta ammaanka.